THE ROCK NUDES EYE SHADOW PALETTE | CosmeticMyanmar
Home » မိတ်ကပ် / Make Up » THE ROCK NUDES EYE SHADOW PALETTE
မိတ်ကပ် / Make Up
THE ROCK NUDES EYE SHADOW PALETTE
ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအရောင်၁၂ရောင်နှင့်ထင်ရှားတောက်ပသောမျက်၀န်းအလှကိုpalett တစ်ခုတည်းနှင့်ရယူနိုင်ပါသည်။အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ဆန်းပြားထူးခြားပြီးစွဲမက်စရာအရောင်များကိုစိတ်တိုင်းကျ ရောစပ်ခြယ်သနိုင်ပါသည်။ မြို့ပြ၏မီးရောင်များအောက်တွင်ပြီးပြည့်စုံသောဆွဲဆောင်မှုကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
By Flower Auto Eye Brow 02 Dark Brown
By Flower Apple Dome Blusher 01 Pink Apple
Tags: Eye ShadowOther MakeupThe Rock Nude Eye Shadow Palette
2019 မှာ Color of the year နဲ့လန်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီလား?
Nude Beach®Eyeshadow Palette ၄၈၈၅၀ ကျပ်
INSTAINLong-Wearing Powder Staining Blush ၂၉၈၅၀ ကျပ်
BETTER THAN FALSE LASHES EXTREME ၄၈၀၀၀ ကျပ်
Chocolate Bar Eyeshadow ၆၇၀၀၀ ကျပ်
BROW QUICKIE ၃၀၀၀၀ ကျပ်
0 ပစ္စည်းအားလုံး Sold Out ဖြစ်သွားတဲ့ Kylie ရဲ့ Valentine’s Day Makeup Collection
0 ချစ်သူလေး သဘောကျမှာသေချာနေတဲ့ LUSH ရဲ့ Valentine’s Day Gift
0 NYX ရဲ့ Can’t Stop Won’t Stop Contour Concealer !!
0 နူးညံ့တဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေအတွက် Maybelline Snapscara!
Blush Body Lotion Body Scrub and Massage Cleansing Comfortable Coverage Creamy Eyebrows Eyeliner Eye Shadow flawless Foaming Facial Cleanser Foaming Hand Soap Fresh Glow Hand Care Hand cream Healthy High Color Pigmentation Hydration Lightweight Liquid Foundation Long-lasting long-wear longwear Matte Moisture moisturizer Moisturizing Natural Other Body Care Other Facial Cleanser Other Makeup perfect Protection Shine Silky Skin Care Smooth Soft Toner Treatment Waterproof နှုတ်ခမ်းနီ / Lipstick မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး / Makeup Remover
သုံးရလွယ်ပြီး အသားအရေကို သိသိသာသာကောင်းလာစေမဲ့ The Saem ရဲ့ Mask လေးတွေအကြောင်း
ကောက်ထားတဲ့ ဆံသားတွေ ဖွာပြီးပျက်စီးနေလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား?
ဆယ်ကျော်သက်တို့ရဲ့ အသည်းစွဲ Kpop Idols တို့အကြိုက်ဆုံး ရေမွှေးများအကြောင်း (အပိုင်း ၁)
Mask ချစ်သူတွေ စမ်းသုံးကြည့်သင့်တဲ့ SEPHORA ရဲ့ Rubber Mask
ဆံပင်ဖြူလေးတွေ ပေါ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေရပြီလား??
Yes to No-Rinse Shampoo Cap!!!!
အသားအရေအတွက် တကယ်အကျိုးရှိမယ့် Physicians Formula ရဲ့ The perfect MATCHA!!
ရှုပ်ပွနေတဲ့ ဆံနွယ်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရပါသလား?